Mudane Guurtida ka tirsan oo sheegay in Golahoodu u yeedhayo Ganacsade iibsaday Sacaadadiin | Somaliland.Org
Mudane Guurtida ka tirsan oo sheegay in Golahoodu u yeedhayo Ganacsade iibsaday Sacaadadiin
December 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)-Mudane ka tirsan Golaha Guurtida Somaliland, ayaa sheegay in Golahoodu u yeedhayo Ganacsade Maxamed Aw-Siciid Geedi oo ka mid ah Ganacsadayaasha Somaliland, kaas oo ay sheegeen in uu lagu wareejiyay Jasiiradda Sacaada-diin.
Guddida joogtada ah ee Golaha Guurtida Somaliland, ayaa warbixin ay dorraad u qaybiyeen fadhigii Golaha kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay siyaasadaha arrimaha gudaha iyo Dibedda, taas ay Golaha Guurtida ay ugu jeediyeen talooyin kala duwan.
Xildhibaan Cawil Xuseen oo ka mid ah Guddida joogtada ah ee Golaha Guurtida oo u waramay Telefishanka Horn Cable TV, ayaa sheegay in Golaha Guurtidu u yeedhayo Ganacsade Maxamed Aw-Siciid, isla markaana uu Goluhu waydiin doono sababta keentay sida uu hadalka u yidhi in uu la wareego Jasiiradda Sacaadadiin. “Golaha hortiisa ayaanu uga yeedhi doonaa si wax looga waydiiyo arrinta iibta Jasiiradda Sacaadadiin.” Ayuu yidhi Xildhibaanku.
Jasiiraddan oo qiyaastii ilaa 8-km oo isku wareeg ah, ayaa dhawaanahan ay soo baxayeen Warar sheegaya in Xukuumaddu ay ku wareejisay laba Ganacsade oo uu Maxamed Siciid Aw-Geeddi ka mid yahay, taas oo ay Xukuumaddu sheegtay in maal-gashi ay ku samaynayaan.